FAMPIANARANA AMBONY : Handray ireo mpampianatra avy amin’ny SECES ny minisitra
Handray ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra mivondrona ao anatin’ny Seces ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary ny fanavaozana, Blanche Nirina Richard izay voatendry nandritra ny fanovana governemanta farany teo, amin’ity herinandro ity, na amin’ny herinandro ambony raha ela indrindra. 31 juillet 2019
Izay no isan’ny nambarany nandritra ny fanatrehany ny atrikasa momba ny fampianarana ambony iraisan’ireo oniversite miisa 12 aty Afrika, notontosaina tetsy Antaninarenina nanomboka, omaly.
Tsy mbola nivaha tanteraka mantsy ny olan’ireto mpampianatra mpikaroka ireto na dia efa nikaonan-doha sy nitadiavana vahaolana tetsy sy teroa aza, raha ny tatitra nataon’ny profesora Ravelonirina Samy Gregoire, filohan’ny Seces, sampana Antananarivo. Nambaran’ity farany fa mbola tsy nivaly manontolo ny fitakiana nataon’ny mpampianatra mpikaroka eny amin’ny Oniversite na dia efa nisy aza ny fihaonana tamin’ny Praiminisitra lehiben’ny Governemanta teo aloha. « Nisy ny vahaolana nomen’ny Praiminisitra tamin’ny fotoana niresahana taminy, saingy noho ny fitarazohana teo amin’ny mpitantana teo aloha, dia tsy nisy zavatra azo notsapain-tanana tao anatin’ny telo volana », hoy ny fanazavany.
Fanondrotana ireo mpampianatra
Teboka miisa fito, raha tsiahivina no isan’ny takian’ireo mpampianatra ireto, ka isan’izany ny fandefasana ny lisitr’ireo mpampianatra mpikaroka maherin’ny 60 taona mba hahafahan’izy ireo misitraka ny tombotsoany manokana rehefa tonga io fe-potoam-piasana io, eo koa ny fanondrotana ireo mpampianatra eo amin’ny toerana tokony hisy azy arakaraka ny taom-piasany sy ny mari-pahaizana azony. Takian’izy ireo ihany koa ankoatra izany ny fandoavana ny tambin-karaman’ny mpampianatra amin’ny fotoana ara-dalàna tsy misy fahatapatapahany.
Ankoatra ireo, notsindrian-dramatoa minisitra ihany koa, fa hotohizana avokoa ny asa rehetra efa vita teo aloha, mba hisian’ny fitohizam-pitantanana eo amin’ny sehatry ny fampianarana. « Ny asa rehetra vita teo aloha dia tohizana avokoa ary hamafisina. Hiezaka izahay hanao bebe kokoa noho izay efa vita rehetra, ho an’ny Seces manokana, horaisiko ireo sampana Seces eto Antananarivo hitadiavana vahaolana miaraka », hoy ny nambarany. Notsindriany ihany koa fa homen-danja manokana manomboka izao ary hatao laharam-pahamehana mihitsy ny fampiharana ny fikarohan’ny mpianatra teny amin’ny Oniversite eo amin’ny fampandrosoana ny firenena.